Xalka Maareynta Mashruuca ee La-taliyayaasha -MarTech Blog
Xalka Maareynta Mashruuca ee La-taliyayaasha
Khamiis, Janaayo 27, 2011 Wednesday, May 2, 2012 Tim Piazza
Waxaa jira saddex nooc oo mashaariic ah. Kuwa aad kaligaa sameyn karto, kuwa aad qof kale ku siin karto lacag si uu kuugu maareeyo, iyo kuwa aad u baahan tahay inaad iskaashi la yeelato dadka kale. Barnaamijka maareynta mashruuca waa nooc saddexaad.
Waxaan dhowaan helay Mavenlink, codsi maareyn mashruuc ku saleysan daruur oo la mid ah Basecamp, laakiin diiradda la saarayo baahiyaha la-taliyayaasha iyo kuwa madaxbanaan. Mavenlink wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto mashaariic, aad ku casuuntid macaamiisha, oo aad u xilsaarto hawlo ujeedo ah wadashaqeyn iyo isgaarsiin wanaagsan, sida Basecamp oo kale. Waxa Mavenlink ka soocayaa waa ku darida qaababka maareynta biilasha.
Ka abuur mashruuc Mavenlink waxaadna u qori kartaa miisaaniyad. Markaad qorsheyneyso mashruuca, waxaad dejisaa howlo iyo alaab la soo daabaco. Markaa waxaad la socon kartaa kharashyada iyo waqtiga mashruuc kasta hawl ahaan, oo haddii waqtigu yahay mid la iibsan karo, deji heerka saacadlaha. Maaddaama biilasha la uruursanayo, dashboardka mashruuca ayaa ku tusaya adiga iyo macmiilka halka aad ka taagan tahay miisaaniyadda.
Waxaan u arkaa dhinaca biilasha inay tahay waxa ugu muhiimsan ee ka maqan barnaamijyada kale ee iskaashiga. Shaqaalaha madaxbanaan iyo lataliyayaashu waxay u egyihiin inay la shaqeeyaan macaamiisha mashruuc ku saleysan, waana adagtahay in la qabto oo la soo sheego waqtiga oo dhan. Bixinta hanaan loogu talagalay dabagalka iyo ka warbixinta miisaaniyadu waa u faa'iido iibiyaha iyo macmiilka labadaba. Waxaa jira waxyaabo kadis ah oo yar, wayna muuqan doontaa marka filashooyinka ay kaladuwan yihiin ama isbedelka mashruuca loo baahan yahay inuu ka muuqdo isbeddelka miisaaniyadda. Mavenlink wuxuu ka dhigayaa miisaaniyadda qayb ka mid ah wadahadalka.
Meelo kala duwan inta lagu jiro mashruuca waxaad ku abuuri kartaa qaansheegasho oo aad ku aqbali kartaa bixinta adoo adeegsanaya isdhexgalka PayPal. Mavenlink wuxuu kala xaajooday qiimo gaar ah PayPal oo qiimo dhimis ku sameysa ganacsigooda caadiga ah. Waxa kale oo jira is dhexgal ku jira koontadaada Google, oo awood u siinaysa isku xidhka kalandarka, wadaagista dukumintiyada, iyo martiqaadyada xidhiidhka.
Qalabka iskaashiga tooska ah ee internetka ayaa u qalma maalgashiga yar ee waqtiga ay ku qaadaneyso dejinta. Basecamp waxay caan ku tahay ururada yar yar ee balaaran ee maamuli kara mashaariicda ka baxsan qaan-sheegashadooda iyo biilasha. Ururada leh mashaakil isku dhafan, ama mashaariic badan oo isku mid ah ayaa laga yaabaa inay ka fiicnaadaan fulinta xalka ku saleysan serverka sida ActiveCollab. Haddii aad tahay la-taliye, soo-saare web ama naqshadeeye madaxbanaan, Mavenlink laga yaabaa inuu kugu habboon yahay adiga.
Tags: mavenlinkMaamulka mashruuca
Beddelaadda: La kulan ujeeddada booqdahaaga
Jan 28, 2011 at 4: 06 AM
Waxaan kaliya dib u furay koontadayda Basecamp dhowr toddobaad ka hor sababtan awgeed. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado!
Jan 28, 2011 saacadu markay ahayd 8:21 PM
Doug, dhab ahaan waxaan maskaxda kuugu hayay markii aan qorayay qoraalkayga. Waan ogaa inaad ka fogaatay Basecamp oo waxaan la yaabay haddii Mavenlink uu ka sii jeclaan doono. Si xiiso leh oo ku filan, Mavenlink ayaa aad uga fudud boorsada jeebka. Xitaa uma baahnid inaad kafeegaaga ka jarto dukaankaas hoose. 🙂
Jan 28, 2011 saacadu markay ahayd 4:29 PM
Waxaan isticmaalaa PBworks. Miyaad isbarbar dhigtay?
Jan 28, 2011 saacadu markay ahayd 8:19 PM
Ma haysto… ilaa hadda. Waxay ila tahay aniga in PBworks ay u shaqeyso sida mashup maareynta maareynta mashruuc-bulsho. Aragtideyda 5,280 ′ waxay tahay inay sifiican ugu shaqeyso ururada waawayn halkaas oo aad kaheleyso in qof walba lagu dejiyo nidaamka, ka dibna aad u jiido mashruucyadaada si aad u ururiso fikradaha, xaqiiqooyinka. Tani daruuri uma shaqeyn doonto la-taliyaha / macmiilka seenyo.
Waxaan aad u xiiseyn lahaa inaan maqlo aragtidaada ku saabsan PBworks, iyo meesha aad u maleyneyso inay sida ugu fiican ugu habboon tahay.
Jan 28, 2011 saacadu markay ahayd 6:43 PM
Runtii waan ku qanacsanahay boostada iyo aragtida aad ku soo qaadatay qiimayntaada Mavenlink. In kasta oo aan dabac yara yara eexan (oo aan ahay aasaasihii Mavenlink), oo aan isweydiin karo sababta aad waligaa u adeegsan lahayd ActiveCollab :), waxaan u maleynayaa inaad qabatay shaqo weyn oo ah qiimeynta booska iyo awooda ka qaybgalayaasha.
Jan 28, 2011 saacadu markay ahayd 8:04 PM
Mahadsanid, Sean. Waxaan u isticmaalay ActiveCollab sidii VP ee Warbaahinta Cusub wakaaladda xayeysiinta. Iyada oo daraasiin daneeyayaal gudaha ah iyo boqolaal daneeyayaal dibadeed ah, waxaan dooneynay xal iskiis u martigeliya oo aan u habeyn karno oo aan ula qabsan karno barnaamijyada kale ee gaarka ah.
Laakiin runta haddii loo sheego, ActiveCollab waxyar buu ahaa oo madax xanuun ayuu ku ahaa tababarka / taageerada. Uma maleynayo in Mavenlink la heli karo waqtigaas. 🙂
Jan 30, 2011 saacadu markay ahayd 6:05 PM
Waxay u egtahay waxoogaa sida Onit. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko haddii Mavinlink uu yahay wax racfaan ka qaadan kara qareennada. Waad ku mahadsan tahay inaad dareenka ii keentay. Waxaan isku dayay daabacaadda sharciga ee 'PBworks Legal' waana ku qancay wada shaqeynta guud, laakiin wali waxay dareemeysaa sida PM loo dharbaaxay wiki. Taasi waxay tiri, waxay ahayd inyar markii aan eegay PBworks.
Febraayo 1, 2011 saacadu markay tahay 3: 42 AM
Hmm, taasi waa feker xiiso leh, Bawlos. Waxaan si fudud ugu khaldami karaa arrintan, laakiin waxay u muuqataa in qareennadu ay si gaar ah ugu nugul yihiin halista gelinta macluumaadka macmiilka ee jawiga "adeegga daruurta". Waad ku doodi kartaa in daruurtu ay u badan tahay inay ka amni badan tahay shabakadda gaarka loo leeyahay ee ku dhex jirta shirkad sharci, laakiin dhibaatadu waxay tahay haddii ay jiri lahayd soo-gaadhis xun oo xogta macmiilka ah, yaa mas'uul ka noqonaya, shirkadda sharciga ama daruurta?
Waxaad moodaa inaad sifiican ubaratay booskan. Maxaad ka qaadanaysaa arrintan? Sidee xubnaha xirfad-yaqaanku u yareeyaan halistooda markay daruuraha ka shaqeeyaan?
Feb 2, 2011 markay ahayd 1:33 PM
Ma fiirisay LumoFlow (http://www.lumoflow.com)?
Waxay bixisaa beddel aad u jaban oo loo yaqaan 'Basecamp' waana mid aad u fudud in la isticmaalo, gaar ahaan markii ugu horreysay ee isticmaaleyaasha sidaas darteed waxay ku habboon tahay iskaashiga macaamiisha. Ma jiro wax shaqeysiin ah oo biil ah maadaama diirada la saarayo abuuritaanka jawi iskaashi oo firfircoon (maahan maareynta mashruuca sida Basecamp).
May 2, 2012 at 9: 29 PM
Waxaan kahelay boostadaada blog raadinta Google… Wali ma isticmaashaa Mavenlink? Fikradaha? In kasta oo aan ahay nin hawlgal ah (suuqgeynta websaydhka), waxaan aad ugu baahanahay qalab PM wanaagsan. Waxaan isticmaali jiray WorkETC, laakiin runtii kuma faraxsani. Basecamp waxay umuuqataa inaysan kufiicnayn hal isticmaale.
Sep 11, 2012 at 6: 36 AM
Waxaan sidoo kale kugula talinayaa inaad isku daydo Comindware, xalka ka dabacsan Basecamp, oo leh muuqaal weyn oo ka warbixinta waqtiga-dhabta ah.
Jan 9, 2013 saacadu markay ahayd 12:07 PM
Sidee ku soo gashay Waxaan helay qoraalkan (2 sano oo dambe!)
Waxaan qiimeynayaa midka la isticmaalayo… doorashadu wey ku badan tahay!